Kungani ukuluma zezinkozi nezinzipho zakhe futhi burrs? Iyini imiphumela?
Ukuze achaze isizathu abantu seziqala nail-iluma engenakwenzeka. Kodwa singasho ukuthi labo abenza lezi zenzo, elibhekene nezinye ukungakhululeki, ukukhathazeka.
Kwenzeka ukuthi umuntu aqhubeka ephila ngemva kulo mkhuba omubi ebuntwaneni, kungaba waphinda sibuyele kuwo ngezikhathi zokucindezeleka, uthuthumele eqinile. Ngokombono kwengqondo, gnawing zezinkozi nezinzipho zakhe, abantu bathanda "nibbles" ngaye ngokwakhe, uma ethi isiphukuphuku ezingenamsebenzi, sokusola ngenxa yabaningi amaphutha, amaphutha, ukwehluleka, njll Lo mkhuba kusikisela ukukhathazeka okusezingeni eliphezulu. Ngalezi izenzo umuntu athole imizwa yabo engalungile futhi nakho. Okunjalo obkusyvaniya esilawulayo izinzipho zabo ngokuthi Onychophagia.
Kungani ukuluma zezinkozi nezinzipho zakhe futhi burrs? Lowo ongenalo abalimala kakhulu kalula, edalula embhedeni nail. Lokhu, kungabangela nezilonda. Ukuze ukuqeda lo mkhuba, ungafaka isicelo ukuze nail sula ekhethekile zidayiswa Pharmacy. Lokhu ukuvenisha kuyinto ukunambitheka kubuhlungu ngempela, futhi ekugcineni isifiso nail iluma ingashabalala. Abesifazane kungase kube ngcono ukuba andise izinzipho acrylic. Badla nail ukuba yinkinga, aphange okuthile bekene ikhokhwe imali eningi, futhi, ungafuni.
Umbuzo: "Kungani ukuluma zezinkozi nezinzipho zakhe futhi burrs?" - Ungayiphendula enye indlela: "emehlweni onjalo ezingemnandi, njengoba izipikili ulunywe yisilwane, Ungafaka umuntu zibe nakakhulu ukucindezeleka futhi imvelo ukubukeka izinzipho zakho uzobe efile ezingemnandi, futhi ungase ucabange, njengoba weirdo.".
Kungani ukuluma zezinkozi nezinzipho zakhe futhi burrs izingane? Ingane ngokuvamile enza lezi zenzo, ngoba uhlangabezana ubudlova nentukuthelo. Bobabili abazali anesibopho ukuyichazela ukuthi izinkinga zakhe zingaxazululwa ngezinye izindlela, futhi nail-okuhlabayo angaya isikhulile, okuholela nemiphumela ebuhlungu, futhi, njengoba kushiwo ngenhla, kungabangela izinqubo ezihlukahlukene ukuvuvukala. Kodwa abazali akufanele sisole ingane yakho ngalokho akwenzako eluma zezinkozi nezinzipho zakhe. Lapha kumelwe sizame ukuqonda ingane, bafunda ngezimbangela ngiyeke lo mkhuba futhi nje ukuchaza konke kuye.
Into kubuhlungu ngempela - burrs. Babonakala uma une isikhumba esomile emhlabeni nail. Coming mbeni nezinye izinto zokugqoka, isikhumba iqala ukwambula, futhi kukhona burrs. Lahla kubo ngezindlela ezilandelayo: ukuba moisturize cuticles (isikhumba elincanyana ekupheleni nail) nge cream, uyifake ebusuku. Futhi, ngezikhathi ezithile kunconywa ukuvakashela salon ubuhle. Ngokusho Cosmetology yesimanje, cuticle noma kunjalo ayikwazi usike, kusukela ngalesosikhathi it phathelana okwe iqala ukwambula. Manje, ochwepheshe abaningi bathuthela okuthiwa ezomile nail sula, lapho isikhumba emhlabeni nail ziphathwe emollients.
Lesi sihloko - ngomzamo uphendula lo mbuzo: "Kungani ukuluma zezinkozi nezinzipho zakhe futhi burrs?". Yiqiniso, izimbangela ezingokwengqondo ngemikhuba enjalo, mhlawumbe, ezibhekwa kuphela ezivame kakhulu.
Manicure ngamatshe. Nail Design ketshezi amatshe
Gel nail sula: ukubuyekezwa kanye yokusetshenziswa
Womzimba Ksenia Dudkin: Biography iDemo nokufeza kwezemidlalo
Izincwadi ezithakazelisayo kakhulu: ukukala kwabantu
Uyini iphamfulethi? Izici uhlobo
Ukwelashwa nokuvikelwa imifantu ezithendeni amakhambi abantu: zokupheka, izindlela
Emazweni ampofu e-Afrika: lokube nawo ezingeni lekuphila, emnothweni